Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » IHawaii lelona lizwe linoxinzelelo lwaseMelika ukuhlala kulo
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • ukonwatyiswa • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Resorts • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IHawaii lelona lizwe linengxaki yoxinzelelo e-US ukuhlala kulo.
Ixabiso lendlu eliphakathi laseHawaii li- $ 1,293,301, lelesithathu liphezulu e-US, ngelixa ikwanamaxabiso aphezulu e-Melika, nge-1,327 yeedola ngenyanga. Ngenxa yoko urhulumente unamanqaku angama-49 amabi kakhulu koxinzelelo olunxulumene nemali, ecaleni kwamanqaku angama-48 awona mbi kwimeko yezendalo ezinje ngeemeko ezibi zendlela kwaye ukuba lelona lizwe likhwaze kakhulu, kukhokelele ekubeni iHawaii ibe lelona lizwe lixinzelelekileyo e-US.
IHawaii ibekwe njengoyena mntu uxinzelelekileyo e-US, ingena njengelinye lawona mazwe mabi ngemali kunye noxinzelelo olunxulumene nokusingqongileyo.
IFlorida ibekwe njengelizwe lesibini elinoxinzelelo e-US, ebonisa amanqanaba asezantsi emali, umsebenzi, impilo, kunye noxinzelelo olunxulumene nokusingqongileyo.
IVermont lelona lizwe lixinzelelekileyo, ikwindawo yesibini ubuncinci koxinzelelo kumanqanaba ezempilo noxinzelelo kwezendalo.
Hawaii ibekwe njengelona lizwe linoxinzelelo eUnited States of America.
Iingcali zokulala ziqhube uphando lokufumana imeko yoxinzelelo kakhulu e-US ukuba ihlale kuyo, ngokusekwe kuhlalutyo lwezinto ezingama-22 zoxinzelelo ezahlukeneyo ezinxulumene nomsebenzi, imali, impilo kunye nokusingqongileyo. Uphononongo lufumene ukuba iHawaii lelona lizwe linoxinzelelo, kwaye iVermont yeyona incinci.
Amazwe afumene amanqaku ali-10 kwinto nganye, kubandakanya amaxabiso ezindlu kunye nerenti, ingeniso, amaqondo oxinzelelo, imisebenzi yomzimba, amanqanaba okulala, ukufikelela kwiindawo ezivulekileyo, kunye nenqanaba lengxolo.
Hawaii phezulu uluhlu emva kokufumana amanqaku ngokukodwa kwimali kunye noxinzelelo lwendalo. Ixabiso lendlu eliphakathi likarhulumente yi-$1,293,301, elesithathu liphezulu e-US, ngelixa linamaxabiso aphezulu okurenta eMelika, kwi-$1,327 ngenyanga. Ngenxa yoko urhulumente unama-49th elona nqaku libi loxinzelelo olunxulumene nemali, ecaleni kwe-48th awona manqaku mabi ezinto zokusingqongileyo ezinje ngeemeko ezibi zendlela kwaye ukuba lelona lizwe likhwaze kakhulu, kukhokelele Hawaii ukuba lelona lizwe linoxinzelelo e-US.
Florida lilizwe lesibini elinoxinezeleko, libekwe ngokulambathayo ngenxa yezinto ezifana nezinga lentswelo-ngqesho, nesi-6.5% sabemi ababhalisa njengabangasebenziyo. Ingeniso ephantsi ehlengahlengisiweyo yombuso, inani eliphantsi lamaziko ezempilo yengqondo ngomntu ngamnye, iipaki zesizwe kunye neendawo ezivulekileyo kumgama wesikwere somhlaba, kunye nenqanaba lengxolo elibangelwe FloridaKwinqanaba eliphantsi.
Kwelinye icala lesikali, isifundo silinganisiwe IVermont njengelona lizwe linengxaki yoxinzelelo. IVermont ixele elona nqanaba lisezantsi lentlupheko elibhalisiweyo ngomntu ngamnye, kunciphisa kakhulu uxinzelelo olunxulumene nemali lukarhulumente. Urhulumente unendawo yesibini efanelekileyo yokunyanga impilo yengqondo ngomntu ngamnye, kunye nelinye lawona mazwe aphezulu okwenza imisebenzi yomzimba kunye nokulala ngokwaneleyo, okukhokelela kwinqanaba lesibini likarhulumente kwicandelo elinxulumene noxinzelelo lwempilo.
UTim Slear uthi:
Oktobha 25, 2021 kwi-19: 32